Aayado qur'aan ah, Axaadis iyo Oraah ku saabsan guurka
Qoysku waa asaaska mujtamaca banii-aadamka , taasoo ah arrin ay isku raacsanyihiin diimaha iyo bulshooyinka kala duwani. Diinta Islaamku waxay arrinta guurka siisay tix gelin gaar ah, iyadoo u arkaysa in guurku uu yahaay dhabbe lagu gaari karo xasillooni, gacalo iyo naxariis dhex marta labada qof ee is guursadey, asturaad arrimohooda qarsoon, xoojin diinta qofka iyo baaqi yeelid isirka banii-aadamka.
Aayadaha iyo xadiiska hoos ku xusani waxay tilmaamayaan faa’iidooyinka guurku suuro gelin karo:
“Aayadihiisa waxaa ka mid ah inuu naftiinna idiinka abuuray xaasas, si aad ugu xasishaan, wuxuuna dhexdiinna yeelay gacalo iyo naxariis; arrintaas waxaa tusaale ugu suganyahay ciddii fakaraysa”, (Suurat Ar-ruum, aayad 21).
”Waxaa laydiin xalaaleeyey habeenka soonka inaad haweenkiinna ka dan gudataan; iyagu waxay idiin yihiin asturaad, idinkuna waxaad u tihiin asturaad………”. (Suratul Baqarah, aayad 187)
Nebigeennii suubbanaa waxa laga weriyey inuu yiri: “Qofkii guursadaa wuxuu kaamil yeelay diintiisa nuskeed ee nuska haray ilaalintiisa Ilaahay ha kaga cabsado”.
Waxaa mahad gaar ah loo celinayaa Shiikh Maxamed Carte oo gacan fiican ka geystey qeexidda iyo fasiiraadda aayadaha iyo axaadiista qoraalka ku soo arooray.
1). DANAHA GUURKA
- Gudasho baahi jinsi
- Dhismo qoys
Waxaa halka ku xusan oraaho iyo axaadiis ku soo arooray dhiirro gelinta guurka.
“Wax lagu talo baxo guur baa ugu wanaagsan”
“Gaari inta la raadinayaa goombaar wiilkeed tabar galaa”
“Raggu waa wiilki dhale, walaalki dhale iyo wadki dhale”
Wiilki dhale waa ninkii guursada isagoo gaarey da’dii caadi ahaan lagu guursan jirey oo markaas wiil dhala. Walaalkii dhale waa kii guursada isagoo aad u da’ yar oo markaas la moodo in isaga iyo wiilkiisu isku da’ yihiin. Wadki dhale waa ninkii wax dhala isagoo duqoobey oo markass inta cimrigiisa ka hartay oo dhan ku dhammeeya korinta wiilka yar oo uu dhalay, isagoo aan calfan doonin wiilkaas waxtarkiisa.
Haddaba, waa in ninku guursado waqti hore oo uu ku noqon karo wiilki dhale ama walaalki dhale.
Xagga diintana bal aan eegno axaadiista soo socota oo ku soo aroortay dhiirrogelinta guurka:
“Dhallinyaroy midkii idinka mid ah oo guur awoodaa ha guursado, maxaa yeelay taasaa isha u laabid badan ibtana u dhawrid badan; kii guurka awoodi waayaana ha soomo maxaa yeelay wuxuu u noqonayaa dhufaan”
“Guursada midda dhasha badan oo gacalada badan, maxaa yeelay tiradiinna ayaan ummadaha kula tartami doonaa maalinta qiyaamaha”.
Haddaba, su’aashu waxaa weeye sidee baa lagu ogaan karaa midda dhasha badan dhali doonta, inta aan la guursan?. Taas waxaa looga qiyaas qaadanayaa haweenka qaraabadeeda ah.
Sida muuqata xaddiiskaan dambe wuxuu ka hor jeedaa fikradda yaraynta dhasha oo ay gaaladu hadda aadka u faafinayso
2). XULASHADA GABADHA
“Wiilkaagu wuxuu hiilo kaaga baahanyahay marka aad hooyadiis guursanaysid”
Oraahdaas waxaa loola jeedaa in ninka guursanayaa uu si fiican uga fiirsado gabadha uu guursanayo iyo cidda uu ka guursanayo.
Xaddiiska soo socdaa wuxuu tusaalaynayaa tilmaamaha lagu xusho haweeneyda la guursanayo, isagoo xoogga saaraya doorashada midda diinta leh, sababtoo ah inay tahay tan garanaysa waajibaadka saaran iyo xuquuqda ay leedahay.
“Haweeneyda waxaa lagu guursadaa afar waxyaalood: quruxdeeda, maalkeeda, dhaladnimadeeda iyo diinteeda, ee ku guuleyso midda diinta leh; haddii aadan sidaas yeelinna waqay gacantaadu ciidda ku dhacdaa!”. Xadiiska soo socdaa wuxuu isna tilmaamayaa in xubinta ugu muhimsan ee nolosha ninku ay tahay naagta wanaagsan.
“Adduunku waa nafci waqti gaaban, nafcigaas kan ugu wanaagsanina waa haweeneyda suubban”.
3). TILMAAMAHA HABBOON EE HAWEENKA
Dal waliba wuxuu iska leeyahay hab uu u qiimeeyo hadba wixii uu jecelyahay, taasoo ku xiran hiddihiisa. Haddaba, halkaan waxaa ku xusan oraaho ragga Somaaliyeed uga faalloodeen tilmaamaha habboon oo ay jecelyihiin inay ka helaan haweenka, kuwaaso ay ka mid yihiin: xishoodka, ciryarida, eray yarida, gaarinnimada, iwl . Oraahihiina waa kuwaan:
”Geel waa xoox farasna waa xawlli, rag waa xaajo dumarna waa xishood”
“Naa saw taan ku iri maahooy codkiyo caanaha yaraysoo, riyaha ceesaan ka maaley.”
“Haddaad inan (wiil) tahay orohdaadaa la caddaystaa , haddaad inan (gabar) tahaynaa ilkahaagaa la caddaystaa”
“Geel ways dhaafi doonaa wada dhalo sidiisii ways dhaafi doonaa; faras ways dhaafi doonaa dhididsado sidiisii ways dhaafi doonaa; rag ways dhaafi doonaa dhiidhiyo sidiisii ways dhaafi doonaa; dumar ways dhaafi doonaa dhiga galo sidiisii (la guursado) ways dhaafi doonaa”
“Saddex baa quruxi ku cashiday: hal cad oo candhoole ah, faras cad oo cur laga gubey iyo naag cad oo aan ragga cayilin”
“Naagtii basiliyaan Ilaah barin wax xoogaana , baalidu sidii habas hadday boor ka kici weydo marnabana inayan bilic yeelanayn ba’a e yaw sheega” (Sayid Maxamed)
“Saddex waa gollo castahay: golcas gaban ugaareed, guri dayr xun laga degey iyo gol ma xirato naagood”
“Ragga magici lama helin, maareeye loo oran; geela magici lama helin, manqo koriye loo oran; dumar magici lama helin, miska weyne loo oran”
“Rag calooshi la cayaar iyo ciil kama baxaw daran, dumarna cirkeed bogato iyo casar seexataw daran”
4). NOOCYADA RAGGA KA MIDKA AH OO AAN HAWEENKU JECLAYN
Ilaa hadda waxaan ka soo faalloonnay aragtida ragga ee xagga haweenka, haatanna bal aan aragno tan haweenka ee xagga ragga. Afarta nooc oo soo socda oo ragga ka midka ahi waa kuwa haweenku dhaliileen:
a) Ninka dheer iyo kan gaaban
“Ninka dheer ha guursan oo haddii gaajo timaaddo guriguu is bilqaa, ninka gaabanna ha guursan oo haddii geelu cadhoobo gonduhuu ka dhayaa oo garbasaarta ma gaaro”
b) Xilogubaha (ninka naagaha ku kulul, af iyo addinba)
“Xilogube lama aqoon waayo oo waa xoogag dheer yahay oo indhahaa xammeeti ah”.
t) Qorqodaha (fuuqdhabiilka)
“Naa hoy qorqode wuu qalaxtamaa oo qaboonadii buu qayliyaa; naa rida qal oo qari buu i yiri naa qaacu yuu bixin buu i yiri”.
j) Godadlaha (ninka naagaha badan)
Haweeney baa waxay tiri:
“Gabagabo colaadeed, gablan wiil la’aaned, gabadanada dayreed iyo godadlaa la kala dhigay”.
Mid kale ayaa soo booddey oo waxay tiri :
“Gabagabo rag loo bixi, gablan laga Ilaah bari, gabadano dab laga shidey ee godadle see ka yeellaa”?!
Sida haweeneyda hadalkeeda ka cad haweenka belaayo uga weyni ma jirto in lala guursado.
5). XANNAANADA HAWEENKA
Haweenku waxay ka dhexeeyaan saddex gacmood oo xannaano, kuwaasoo ah :
- Gacanta waalidkooda, inta aan la guursan
- Gacanta nimankooda, marka la guursado
- Gacanta ilmohooda, marka ay weynaadaan
Oraahda soo socotaa waxay tilmaamaysaa waxyaalaha dumarka u daran oo la rabo in fiiro gaar ah loo yeesho:
“Saddex dumarka waw belo: ummulnimada jiilaal, ubad lagu uleeyaa iyo arradku dumarka waw belo”
Axaadiista soo socotaa waxay si xeel dheer u tilmaamayaan dhaqanka habboon oo la rabo in haweenka lagula dhaqmo:
“Khayr iskula dardaarma daryeelka haweenka”
“Haweenka ma maamuuso nin wanaagsan mooye, mana xumeeyo mid xun mooyee”
“Kuwiinna idiinku ikhyaarsani waa kuwa haweenkooda ugu ikhyaarnimada badan”
“Labo seeddi oo murantay suugaan rag baan moodey; soddoggii hadday gaarto saxariir rag baan moodey; soddohdii hadday gaartana ha la kala socdaan moodey”
“Inta ayan waxba dhalin keligaa baa jiidi kara, marka ay ilmo aan badnayn dhashana tolkaa kula jiidi kara, markii ay ilmo badan dhashana cidina ma jiidi karto”
“Ninku hal fallaar buu haystaa, naagtuna labo iyo toban fallaarood, halka fallaar buuna ku dilaa”.
Arrintu ma aha fallaaro run ah ee waxay tilmaamaysaa heerka dulqaadka ee labada qof. Sida dhacda, markii khilaaf dhacoba waxaa suurowda in haweeneydu tiraahdo “ha lay furo”, taasoo ka imanaysa laab-lakaca haweenka ku badan. Markii ay sidaas tiraahdaba waxay la mid tahay iyadoo fallaareheedii mid ka mid ah gantay. Ninku fallaarta keli ah oo uu haystaa waa dalaaqda, taasoo markii ay is khilaafaanba ay dhici karto inuu furriin ugu cago jugleeyo , hase ahaatee uusan marna ka dhabaynnin. Wax arrintu sidaas ku socotoba waxaa aakhirka la gaaraa waqti ay haweeneydu, markii ay duqowdo oo ay ogaato in haddii la furo ayan jirin cid kale oo wax ku falaysaa, ay wax kasta oo ay ninkeeda ka dhaliisho isaga dulqaadato. Taasi waxay la mid tahay iyadoo ay fallaarihii
“Raggu hoggaamin bay haweenka ku leeyihiin, taasoo ka imanaysa waxa Ilaahay qaarkood qaarka kale kaga fadli yeelay iyo waxa ay bixiyeen oo maalkooda ka mid ah………” (Suuratu An-nisaa’, aayad 34).
“Haddii aad ka baqdaan khilaaf labadooda dhex mara soo dira ergo ehelkiisa ah iyo ergo ehelkeeda ah; haddii ay maslaxo doonayaan Ilaahay wuu waafajinayaa; dhab ahaan Ilaahay waa kii cilmi iyo xog ogaalnimoba badan” ( Suuratu An-nisaa’, aayad 35)
“Haddii ay haweeney ninkeeda uga baqdo madaxtaag ama ka jeesasho, danbi korkooda ma ahaannin haddii ay dhexdooda ka heshiiyaan, heshiiskaana khayr badan……..” (Suuratu An-nisaa, aayad 128)
Xaddiiska soo socda oo waafaqsan micnaha aayadahaas, waxaa laga faa’iidaysanayaa in furriinku uu yahay xalliga ugu xun oo khilaafka qoyska lagu xallin karo, sidaas awgeedna loo baahanyahay in aad looga fogaado, intii laga fogaan karo.
“Xalaal tan Ilaahay ugu necebyahay waa furriinka”
“Haween ama ka samir ama u samir”
“Inta ayan waxba kuu dhalin waa naagtaada, marka ay dhawr carruur ah kuu dhashana waa ilmahaaga hooyadood, marka ay ilmo waaweyn yeelatana waa shaydaan naagtiis”.
“Waxaad yeelaysaan diidney dhaha”
“Haweeneyda waxaa laga abuuray feer qalloocan, feertana waxaa ugu qallooc badan qaybta kore, haddii aad isku daydid inaad toosisana waad jebineysaa haddii aad iska deysidna waa qalloocnaanaysaa” Riwaayad kale waxaa ku soo arooray:
“ Haweeneydu waa feer oo kale, haddii aad toosi is tiraahdana waad jebineysaa, haddii aad sideeda kula dhaqantidna waxaad la dhaqmaysaa iyadoo qallooc ku jiro”
“Geel waa la kala xoogsadaa xubin rag weeyaane”,
“Wax xiniinyo go’an ninkii xilo laga xereeyaaye”.
“Aboodigu ma lalo garab hadduu iin ku leeyahaye”,
“Ma abraari karo adamihii araxda beelaaye”,
“Usha ma uu qaadan karo sheybihii arag darreeyaaye”,
“Lafta araxda iyo ooftu waa udub dhexaadkiiye”,
“Meeshaan ka aa’ iri Ilaah keliya uun baa og”.
“Hangaraarac iyo good sidood hor iyo dabo laabka”,
“Indheheer hoggoodii ka yimid iyo hoorka iga qubanaaya,
“Hanqal la’aanta waxaa iigu wacan ina-odow heedhe”.
Intaasi markii ay afkiisa ka soo baxday ayaa walaalkiis gartay hadalka uu soo wado culayskiisa. Markaas buu yiri walaalow intaas waxba ha ku darin gabadhii waan kuu